Nicheonlinetraffic - သင့်ဆိုဒ်အတွက်အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Backlinks ရရန်ရိုးရှင်းသော Hacks များ
သင့်ဆိုက်ကိုများအတွက်အရည်အသွေး website ရဲ့ backlink Get ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ Hack
site တစ်ခုက Google အတွက်ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာ၌အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်နိုင်အောင်တက် add သောဒြပ်စင်များနေဆဲအများအပြားက်ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များမှနက်နဲသောအရာတခုကိုရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုဝယ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုများပိုကောင်းအောင်ဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ဒေါ်လာဖြုန်းဖို့အများကြီးဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ သင်ပထမဦးဆုံး 10 SERPs အကြားပေါ်လာအောင်သောအချက်များတစ်ခုမှာ website ရဲ့ backlink ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတာရှည်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့နှင့်သင်သင့် site အတွက်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကြီးထွားစေနိုငျသောအလွန်ကြီးစွာသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Google ကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်အသုံးပြုသော SEO ဆိုသည်မှာနည်းဗျူဟာတစ်ဦးအဖြစ်နှစ်ပေါင်းအသုံးပြုထားပြီးသော်လည်း, သင်အခြားသူကသုံးပြီးသင်က Google ကအပြစ်ပေးရစေခြင်းငှါလာသောအခါအလွန်သတိထားပါရန်ရှိသည်။ website ရဲ့ backlink website တစ်ခုဘယ်လိုယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချအဆုံးအဖြတ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်အသုံးဝင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ကယုံကြည်ယူဆနေသောကြောင့်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်, မြင့်မားစေရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်အဆင့်၏ဖြစ်နိုင်ခြေညွှန်ပြလင့်ခ်ပို။
အမြားအပွားအဆင့်အတွက် website ရဲ့ backlink ၏အသုံးဝင်မှုသတိပြုမိသည့်အခါသူတို့ရာထူးရယူအတွက်သံသယရှိနည်းလမ်းများအသုံးပြုခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ Google က၎င်းတို့၏မဟာဗျူဟာတက်တောင်တက်ကြောင့်ပိုပြီးလေးနက်အောင်အရှင်ခြယ်လှယ်ကိုသတိပွုမိမတိုင်မီရှည်လျားမယူခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမကပိုညံ့ link ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနည်းဗျူဟာများရှိပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လင့်များလုပ်ဖို့သန့်ရှင်းတရားဝင်နည်းလမ်းများသုံးနိုငျလျှင်, သင်သည်သင်၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့အရည်အသွေးကို website ရဲ့ backlink စေသည်?
အရည်အသွေး website ရဲ့ backlink ၏အစိတ်အပိုင်းများ
ဒိုမိန်း၏အာဏာပိုင် - သငျသညျအခွင့်အာဏာရှိပြီးပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင်း site တစ်ခုကနေ website ရဲ့ backlink ရရမည်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုအခွင့်အာဏာ site တစ်ခု, ပိုသက်ဆိုင်ရာသင့်ရဲ့ website ရဲ့ backlink ဖြစ်လိမ့်မည်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဆက်စပ်မှု - ဆီလျှော်မှုမရှိသည့်ဆိုက်များမှသင်၏အကြောင်းအရာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မရှာပါနှင့်။ ၎င်းသည်ဆီလျှော်မှုမရှိသောလင့်ခ်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဂူးဂဲလ်တွင်အချို့သောဆိုဒ်များကိုအပြစ်ပေးရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
nofollow လင့်များအသုံးပြုခြင်း - အဲဒီသင့် site ထဲမှာ spam ဖြန်ရှောင်ရှားအတွက်အရေးကြီးလှသည်။ သငျသညျ nofollow နှင့် dofollow website ရဲ့ backlink အကြားချိန်ခွင်လျှာဒဏ်ခတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာကောင်းသောနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝအလင့်များအသုံးပြုခြင်း - က Google နှင့်အတူ Left, မည်သည့်သဘာဝ link ကိုယင်း၏လမ်းညွှန်ချက်များဆန့်ကျင်တတ်၏။ links အမြဲအကြောင်းအရာအတွက်သဘာဝကျကျပေါ်လာသငျ့သညျ။
ချိတ်ဆက်သော့ချက်စာလုံးများ သောစာမျက်နှာ၏ URL ၌ရှိကြ၏။
အရည်အသွေးမြင့် website ရဲ့ backlink စေသောဒြပ်စင်များသိကြပြီးမှ, သင်မည်သို့နောက်ထပ် website ရဲ့ backlink ပိုပြီးအရည်အသွေးစေသလဲ? ကောင်းပြီ, အထက်ပါသငျသညျအထဲကကိုကူညီနိုင်ပေမယ့်အရည်အသွေးက website ရဲ့ backlink ရဖို့သင့်ရဲ့ site ကို enable လိမ့်မည်ဟုနှစ်ခုကိုအဓိကသော့ရှိပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါနည်းလမ်း website ရဲ့ backlink တည်ဆောက်ရန်:
သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမရှိရင်, သင့် website နှင့်ဆက်သွယ်ရေး junky ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့် website ရဲ့ backlink သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ဘို့သင့်အကြောင်းအရာအရည်အသွေးလုပ်ရပေမည်။ သင်စားပွဲပေါ်မြင်သာထင်သောအကြောင်းအရာများကိုရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိပြီးနောက်, သင်ကမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ website ရဲ့ backlink တွေအကြောင်းမျှမှော်ရှိပါသည်။ သင်သည်သင်၏အကြောင်းအရာစျေးကွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် infographics ကိုသုံးနိုင်သည်။
တစ်ဦး၏အဆိုအရ လေ့လာချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်လေးပုံတပုံကအမြင်အာရုံအကြောင်းအရာ process မှတစ်စက္ကန့်ကိုယူ။ နှင့်သင့်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုသူများအများ၏အာရုံစူးစိုက်မှု span လူသိများနှင့်ပရိသတ်ကိုသာ 8 စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်တော်မူပြီးမှ, သငျသညျအမြင်အာရုံဘက်ပေါင်းစုံအကြောင်းအရာဖန်တီးရန်ရှိသည်။ သငျသညျအခွင့်အာဏာသြဇာများစာရင်းကိုအတူတက် လာ. , သငျသညျအသှေးကိုအကြောင်းအရာရှိပါကထိုသူတို့အားအထဲကကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဖက်ကိုလျစ်လျူရှုမထားဘူး, သငျသညျအလွန်ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ profile များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ရှိသည်နှင့်သူတို့သုံးတဲ့လင့်များ။ သငျသညျ, သူတို့ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သူတို့၏လင့်များရှုမြင်လျက်, ပြိုင်ဘက်ရဲ့ list ကနေအကောင်းဆုံးလင့်ခ်ကောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက website ရဲ့ backlink ရှည်လျားသောအဘို့အရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကအသုံးပြုခဲ့ပြီးတကိုအဓိကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုသူတို့ကိုအနေနဲ့သက်ရောက်မှုဖြစ်စေဘို့, သင်သည်ထိုသူတို့အရည်အသွေးကိုအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးက high-အခွင့်အာဏာ site ကိုအောင်လျှင်, သင်မကြာမီမြင့်မားသောအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့အားမေ့လျော့က်ဘ်ဆိုက်များသို့ချိတ်ဆက်အသွားအလာကိုဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအသှေးကို website ရဲ့ backlink တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်စေ့စေ့စပ်စပ်များမှာပြီးနောက်သင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၌သင်တို့၏ရှေ့မှောက်တွင်မြှင့်တင်ရန်အင်တာနက် traffic ကိုမဝယ်နိုင်ပါ။ သင်ကလိုင်းပေါ်မှာလာမယ့်ဖြစ်နှင့် Google နှင့်အခြား search engine များပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။